အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့အကြောင်း အမေရိကန်သံရုံးက သတိပေးထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းမှားဗီဒီယိုပျံ့နှံ့ | သတင်းအချက်အလက်စိစစ်မှု
Police officers stand guard in front of US embassy in Yangon on late july 24, 2016. - The United States Embassy in Myanmar heldatear gas training exercise on Sunday night that sparked rumours of an explosion and brought emergency services to the scene,apolice officer said. Speculation rippled across social media after fire trucks and ambulances were seen outside the embassy compound in Myanmar's largest city, but local officer Zaw Win told AFP it was notabomb explosion. (Photo by YE AUNG THU / AFP) (AFP / Ye Aung Thu)
အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့အကြောင်း အမေရိကန်သံရုံးက သတိပေးထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းမှားဗီဒီယိုပျံ့နှံ့
AFP မြန်မာ ပုံနှိပ်ဖော်ပြသည့်နေ့စွဲ အင်္ဂါ7ဇူလိုင် 2020 အချိန် 09:30
မြန်မာနိုင်ငံက အဓိကမြို့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်၊ နေပြည်တော်နဲ့ မန္တလေးတို့မှာ တိုက်ခိုက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်ကြောင်း အမေရိကန်သံရုံးက ထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့ ဗီဒီယိုတစ်ခုကို ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာ ကြိမ်ရေ သောင်းချီ ပြန်လည်မျှဝေခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီဗီဒီယိုဟာ နားလည်မှုလွဲမှားစေနိုင်ပြီး အမှန်တော့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတုန်းက သတင်းဗီဒီယိုတစ်ခုပါ။
ဒီဗီဒီယိုကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့တုန်းက ဖေ့စ်ဘွတ်ရဲ့ ဒီလင့်ခ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကြည့်ရှုတဲ့အကြိမ်ရေ ၆၇,၀၀၀ ရှိပါတယ်။ ပြန်လည်မျှဝေတဲ့အရေအတွက်ကလည်း လက်ရှိအချိန်အထိ ၂၆၀၀ ကျော် ရှိနေပါပြီ။
၅၃ စက္ကန့်ကြာမြင့်တဲ့ အဲဒီဗီဒီယိုဟာ Myanmar National Television (MNTV) ရဲ့ မူလသတင်းဗီဒီယိုကနေ ဖြတ်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတင်းဗီဒီယိုမှာ အမေရိကန်သံရုံးကထုတ်ပြန်တဲ့ လုံခြုံရေးသတိပေးချက် screenshot ကို ဖော်ပြထားပြီး သတင်းတင်ဆက်သူ ပြောတဲ့အသံဖိုင်မှာတော့ “မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့ကြီးသုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်၊ နေပြည်တော်နဲ့ မန္တလေးမြို့တွေမှာ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်ချေရှိတာကြောင့် လုံခြုံရေးသတိရှိကြဖို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံရုံးက ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်” လို့ ပါရှိပါတယ်။
ဒေါ်နန့်ခိုင်သဇင်ဝင်းအမည်ဖြင့် ဖေ့စ်ဘွတ်သုံးစွဲသူတစ်ဦးတင်ထားသည့် နားလည်မှုလွဲမှားစေနိုင်သောပို့စ်ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့က ယူထားသည့် screenshot
ဗီဒီယိုနဲ့အတူ တွဲတင်ထားတဲ့စာမှာတော့ “ဂရုစိုက်ကြပါရှင် Za. 1662020” ဆိုပြီး တွေ့ရပါတယ်။
ဒီဗီဒီယိုကို ဖေ့စ်ဘွတ်ရဲ့ ဒီလင့်ခ်၊ ဒီလင့်ခ်နဲ့ ဒီလင့်ခ်တွေမှာလည်း ၂၀၂၀ ဇွန်လက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတိပေးချက်ဆိုတဲ့ စာသားမျိုးတွေနဲ့ တွဲတင်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီပို့စ်တွေဟာ နားလည်မှု လွဲမှားစေနိုင်ပါတယ်။
အဓိကကျတဲ့စကားလုံး (keyword) ကိုသုံးပြီး ရှာကြည့်တဲ့အခါမှာ MNTV သတင်းရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ အလားတူ ဗီဒီယိုကိုပဲ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့တုန်းက ဒီလင့်ခ်မှာ တင်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ နေ့စွဲဖြင့် MNTV ၏ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာတွင် တင်ထားသောဗီဒီယို၏ screenshot
ဗီဒီယိုရဲ့ခေါင်းစဉ်မှာ “26.9.2019 News / ရန်ကုန်အပါအဝင် မြို့ကြီး ၃ မြို့မှာ လုံခြုံရေးသတိရှိရန် အမေရိကန်သံရုံးထုတ်ပြန် / #mntv1pmnews” ဆိုပြီး တွေ့ရပါတယ်။
အောက်မှာ နားလည်မှုလွဲမှားစေနိုင်တဲ့ပို့စ်တွေပါ ဗီဒီယို (ဘယ်) နဲ့ MNTV ဗီဒီယို (ညာ) တို့ရဲ့ screenshot တွေကို နှိုင်းယှဉ်ပြထားတာပါ။
အဓိကကျတဲ့စကားလုံး (keyword) ကိုသုံးပြီး ရှာကြည့်တဲ့အခါမှာ အမေရိကန်သံရုံးရဲ့ ကြေညာချက်ကို သံရုံးဝက်ဘ်ဆိုဒ်ရဲ့ ဒီလင့်ခ်မှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့စွဲနဲ့ တွေ့ရပါတယ်။
ထုတ်ပြန်ချက်ပါ စာသားတချို့ကတော့ အခုလိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ “စက်တင်ဘာ ၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၆ နဲ့ အောက်တိုဘာ ၂၆ တို့မှာ နေပြည်တော်ကို တိုက်ခိုက်နိုင်ချေရှိတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့က စုံစမ်းသိရှိရပြီး လာမယ့်လတွေအတွင်းမှာ နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးမြို့တို့ကို တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်”
ပြည်တွင်း သတင်းမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ မြန်မာတိုင်းစ်ကလည်း အဲဒီသတိပေးချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတုန်းက ဒီလင့်ခ်မှာ သတင်းရေးသားဖော်ပြခဲ့ဖူးပါတယ်။
လုံခြုံရေးသတိပေးချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ထားတာရှိ၊ မရှိ အမေရိကန်သံရုံးရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှာ ဝင်ရှာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လအထိ တစ်စုံတရာ ထုတ်ပြန်ထားတာမျိုး မတွေ့ရပါဘူး။